औसत डचमेनको मानसिकता मृत्यु भएको छ: कमजोर र निष्क्रिय: मार्टिन व्रिजल्याण्ड
यदि यस लेखको शीर्षकले तपाईंलाई सामग्री पढ्न उत्प्रेरित गरेको छ भने, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आफै कमजोर र निष्क्रिय हुनुहुन्छ। यो पनि हुन सक्छ कि तपाईंले शीर्षकसँग सहमत हुनुहुन्छ वा केवल उत्सुक हुनुहुन्छ। तर ईमानदार हुनुहोस्: यदि तपाईं औसतको वरिपरीका मान्छेहरु लाई सोध्नुहुन्छ भने, ठूलो साधारण मानवीय व्यक्ति हो कि मान्छे सबैको लागि आफ्ना कंधेलाई ठिक पार्छन् र उनीहरूको बारेमा केहि गर्न सक्दैन भन्ने महसुस गर्दछ। विशेष गरी "आशावादी" शब्द र "सकारात्मक" शब्दहरू राम्रो गर्दै छन् (हेर्नुहोस् यहाँ) र यदि तपाईं महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ भने तपाईं 'नकारात्मक' वा 'साजिश विचारक' हुनुहुन्छ। उचित छ उचित: म आफैलाई चिन्ता थिएन (उदाहरणको लागि) मेरो 40e के राजनीति या संसारमा के भयो बारेमा। तपाईंले कहिलेकाहीँ केही चीज लिनुभयो, तर अन्यथा यो विशेष रुपले धेरै पैसा कमाउन महत्त्वपूर्ण थियो, ताकि तपाइँ यसलाई उदारतापूर्वक खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
यद्यपि केही बिंदुमा प्रकाश आउछ कि हामी कम हुदैछौं र सानो कदमहरु मार्फत पुलिस राज्य तिर बढि बढायो। मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा, यसले कार्य गर्न निर्णय गर्यो। म अझै एक राम्रो तरिकाले भुक्तान गरिएको बिक्री प्रबन्धकहरूको काममा बस्न सक्दिन र कसरी राज्य हामीलाई चुन्च जारी राख्नुहुन्छ। म वास्तवमा सबैले सोच्न चाहानुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईंको घर र सुन्ता हराउने खतराको साथ, तर तपाईका वरिपरी निर्माण गर्ने जेल अब अल्पकालिक अवतरणहरू भन्दा धेरै खतरनाक छ। म किन यसो भन्छु? किनभने यो यति छ। अधिक र अधिक स्वतन्त्रता लिइएको छ, त्यहाँ अधिक से अधिक कानुनहरू (प्लस निष्पादकहरू र यी कानुनहरूको निरीक्षकहरू) छन् र हामी पुलिस स्थितिमा जान्छौं जसमा सबै चीजहरू र सबैलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ र तपाईलाई अरूलाई सहयोग प्रदान गर्दछन् भने पनि सजाय हुन्छ।
यदि हामी पछि पछि नगरी कम्पनी छ र ब्लकचेन को माध्यम ले प्रत्येक कार्य को लागी ट्रेसिबल हुन्छ, त्यो पहिले देखि नै असंभव हो जो तपाईंको खर्च को कोठा मा पूरी तरह एक झटका छ। वृद्धले एकअर्कालाई भेट्न र सँगै पकाउन असम्भव छ, किनभने एक निरीक्षकले गुनगुनाउन सक्दछन् कि उनीहरु सँगै बस्छन् र पेंशन कम हुन्छ। बेघर व्यक्तिलाई तपाईंको घरमा एक कोठा प्रस्ताव गर्न असम्भव छ, किनभने तपाइँ एकै ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो आवास लाभ, लाभ वा कर अधिकारीहरूलाई मात्र सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ एक साथ रहन सक्नुहुन्छ र यति। नजिकैको भविष्यमा, यदि तपाईंको डीएनए डाटाबेसमा छ र तपाईंको स्मार्टफोनले प्रत्येक चरणमा तपाइँलाई लिन्छ (पेसोमेन्ट पहिले नै धेरैसँग लोकप्रिय छ) रेकर्ड गर्दछ, तपाइँ आफ्नो स्वास्थ्य को माप गर्नुहुन्छ र तपाईलाई वास्तवमा थाहा छ, तपाईंको वरपर के हो रमाईलो लागेपछि उनीहरु एकैछिनमा रमाईलो लागेकी थिईन। मैले भनेँ- "तपाईलाई थाहा छ?" मैले भनेँ।
स्मिलबिङ सामाजिक क्रेडिट प्रणालीमा निर्माण भइरहेको छ, जहाँ तपाइँ आफैले आफैंबाट जोगाउन चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको क्रेडिटमा प्रभाव पार्न सक्छ। यो प्रणाली चीनमा सामान्य छ अप्रत्याशित रूपमा प्रविष्ट गरियो। नेदरल्यान्ड्स र बाँकी युरोपको, यो एकदम धेरै सूक्ष्म हुनेछ। यहाँ परिचित वेबपप्स, एअरबिनब, लिङ्किन र सबै प्रकारको सोशल मिडियामा समीक्षा गरिन्छ। तथापि, यदि ब्लकचाई तपाइँको सबै कार्यहरु को ट्रयाक राख्छ र (उस ब्लकचेस्टर को बुनियादी ढांचे को माध्यम ले) सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं अविश्वसनीय रूप देखि निश्चित हो कि सबै उन कार्यहरु द्वारा तपाईं द्वारा गरे, तपाईंको पूरा दैनिक खर्च पैटर्न, तपाईंको वित्तीय व्यतीत पैटर्न र तपाईंको सामाजिक नेटवर्क अपरिचित पारदर्शी हुन सक्छ। 'सबै चीजहरूको इन्टरनेट' र वायरलेस डीएनए ट्यागको संसारमा तपाईंले सबै चीजहरू (मासु, रोटी, सेतो वस्तुहरू र अचल सम्पत्तिबाट) खरीद गर्न सक्नुहुन्छ यो विस्तृत विवरणमा तपाईं सबै खरिद, बेच्ने र उपभोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंको क्रेडिटहरू (ब्लकचेन बिटकोइन-जस्तै सिक्का) को रूपमा "चाँडो व्यवहार" को परिणामले चाँडै राज्यबाट हटाउन सकिन्छ वा तपाईलाई "खराब व्यवहार" गर्ने व्यक्तिसँग व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाई संग काम गर्दै हुनुहुन्छ ।
यो सबै कदम द्वारा कदम पेश गरिनेछ र तपाइँको उपभोग व्यवहार को आधार मा शायद उच्च या कम प्रीमियम जस्तै चीजहरु संग शुरू हुनेछ, तर अंततः जसको साथ तपाईं संग बातचीत। सबै पछि, धेरै पीडा गर्ने व्यक्ति वा पीडा गर्ने व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दा तपाईंको व्यवहारलाई प्रभाव पार्न सक्छ। म यहाँ भविष्य को एक चित्र स्केच गर्न को लागी कि तपाईं अझै दूर भइ रहेको हुन सक्छ, तर यो तपाईं को लागी निकट छ र मानिसहरु को एक जनावर जानवर लग रहेको छ, हामी सोशल मीडिया मार्फत रुचि को प्रणाली को आदी हो, चाहे इन्स्टाग्राम को माध्यम ले कनेक्ट गर्न को लागी या नहीं , Snapchat र सबै प्रकारका सेवाहरूमा 'समीक्षा' असाइन गर्दै।
पोइन्ट ड्राइभिङ इजाजतपत्र पहिले नै कसरी सजाय प्रणालीले काम गर्नेछ भन्ने राम्रो उदाहरण हो। र अधिक आउँदैछ जसको लागि मानिसलाई सजाय दिइनेछ। हामी सबै प्रकारका फन्टहरूमा क्रेडिट कार्ड प्रणाली र प्रत्येक चरणको पालना गर्नका लागी जान्छौँ। दुर्भाग्यवश, यो पढ्ने अधिकतर मान्छेले स्वयंलाई प्रणालीमा योगदान पुर्याउन सक्ने सबै कुरालाई सहयोग गर्दछ वा कार्यान्वयन र नियमहरूको नियन्त्रकहरू हुन्। अन्य लियडेन नयाँ पीढ़ी यी कार्यहरू पूरा गर्न op अनियमितता र आज्ञाकारितामा। पट्टामा बच्चा सम्भवतः दिशाको सबैभन्दा प्रतीक हो जुन समाजमा लिइएको छ। सबैजना एक पट्टामा छ र हामी एकअर्कालाई सिकाउँछ कि यो एक पट्टामा राम्रो राम्रो छ। हामी एक पट्टामा रहन को लागी एक-अर्कालाई जाँच गर्छौं र त्यहाँ सम्पूर्ण सेनाहरू रहेका छन् जसले नियमहरू भत्काइयो भने सँगी मानिसलाई सजाय दिन्छ। अन्य उच्च जुर्माना वा दण्ड लाग्न तयार छन् र यो राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले चल्ने मिसिन हो, किनकी सबैले जनावरको आफ्नो सानो घर राख्न र सानो बगैचा जूताहरू हटाउन चाहन्छन्। हामी एकअर्कालाई भन्छौं 'एक पट्टामा रहनु राम्रो र सुरक्षित छ'।
तपाइँसँग लामो समयसम्म कार्य लिनको लागि प्रतीक्षाको लागि समय छैन। यो पनि सोचेको छैन कि सरकारले तपाईंलाई बचाउनेछ। सरकार र शम लोकतान्त्रिक द्रव्यमानी जेल मोडेलको कारण हो। जब सम्म तपाई प्रणाली को बनाए राखन मा मदद को रूप मा, तपाईं वास्तव मा जटिल हो र तपाईंको बच्चाहरु लाई तपाईंको विरासत: डिजिटल कुलपन्थी पुलिस राज्य। यदि तपाइँका छोराछोरीले तपाइँलाई सोध्नुभए पछि तपाईले यसको बारे केहि गर्न को लागी कुनै प्रयास गरेनन: तपाईको जवाफ के हो? "मैले आफ्नै मा केहि गर्न सकेन"? हो, तपाईं केहि गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईं आफ्नो निश्चितता गुमाउन डराउनु भएको थियो र गलत विचारमा राख्नुभयो कि यदि तपाइँ पर्याप्त ध्यान दिनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुभयो, योग अभ्यास गर्नुभयो वा तपाईं दोषी महसुस गर्न आध्यात्मिक अपमानजनक प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भने अपील गर्न "हो, तर यदि म आफ्नै मा केहि परिवर्तन गर्न को लागी, म आफ्नो काम गुमाऊँगा र अरू कसैले मेरो ठाँउ लिनेछ र केहि पनि परिवर्तन हुनेछैनया त तर्क छैन। त्यो आफैलाई माफी माग्छ, र त्यस मनोवृत्ति लिएर तपाईंले सामूहिक मनोवृत्तिको मूल्याङ्कन गर्न योगदान दिनुहुन्छ। तपाईं वरपर धेरै तिरस्कार गर्ने बारेका बारेको बारेमा कुरा गर्दैन (हेर्नुहोस् व्याख्या).
कार्य गर्ने समय अब ​​छ। त्यो के हो जान्छ भन्ने कुराको बारेमा सुरु हुन्छ (जसको माथि माथिको ढोका) र त्यसपछि मुद्दालाई निषेध गर्दै। यसको लागि तपाईं साँच्चै चेतनाको नयाँ स्तरबाट जीवन सुरु गर्न चाहनुहुन्छ (हेर्नुहोस् यहाँ)। एकै समयमा तपाईंलाई यो अभ्यासमा राख्नु पर्छ, किनकि अन्यथा तपाईले (आध्यात्मिक) कपडा धुनु अघि खैरहेछ। यो पनि पढ्नुहोस् यो लेख सहमत हुनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईं कसरी आफ्नो जीवनमा कंक्रीट हुन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा, तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ यदि तपाईंको घर आगो र फायर फटाउने थियो भने के गरौं भने: बस्न र आगोको लागि पर्खनु पर्दैन, अग्निको अन्त्य गर्न वा धेरै लामो ढिलो सम्म पर्खनुहोस् घरबाट भाग्न पनि छ? कार्य लिनको लागी समय!
यस साइटबाट लेखहरूको साझेदारी फेसबुक द्वारा रोकिएको देखिन्छ। यसैले यदि तपाई साझा गर्नुहुन्छ भने, तपाइँका साथीहरू अहिलेसम्म उनीहरूको न्यूज फिडमा लेख देख्न सक्दैनन्। त्यसोभए समयले मानिसलाई सक्रिय रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा वा लेख्नका लागि सिध्याउनका लागि सिधै लेख्न आउँछ। त्यो पहिले नै परिवर्तन सुरु गर्न मद्दत गर्न पहिलो सुरु हुन सक्छ। यो वेबसाइट आलेखभन्दा भरिएको छ जुन तपाइँ वरपरका बारेमा खुलासा छ भनेर तपाईलाई थाहा छ। यसको साथ केहि गर्नुहोस् र तपाईंको क्षमता तोड्नुहोस्।
ट्याग: विशेष, मानसिकता, निष्क्रिय, थप्पड
2 जुलाई 2019 मा 14: 12
लेखसँग पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहोस्, यो कार्य गर्नका लागि समय ..
2 जुलाई 2019 मा 15: 49
ठिक दाँया .... तर धेरै। सम्पूर्णसँग बुझ्न र बुझ्न क्षमता छैन। कुनै कुरामा तपाइँ तिनीहरूलाई कहिलेकाहीं बिन्दु गर्नुहुन्छ। यसले घुसाउन सक्दैन। तपाईंको अघिल्लो टुक्रा मध्ये एक को रूप मा, जसमा तपाईंले रोल्ड बूम को उल्लेख गर्नुभयो। मैले आफ्नो अधिक ट्यूब भिडियो हेर्नु भएको छ, र उहाँले यसलाई धेरै राम्रो तरिकाले उनको फिलिममा वर्णन गर्दछ जसमा उनले मानवता सबैको रूपमा एनपीसी (क्यारेक्टरहरू गैर बजाउने) देख्छन्। वास्तवमा गुफा को प्लेटोको एल्गोररीको एक आधुनिक संस्करण हो।
2 जुलाई 2019 मा 17: 04
तपाईले यो लेख पढ्नु भएको छ:
2 जुलाई 2019 मा 17: 44
मैले साँच्चै पनि पढेको छु .... मलाई लाग्छ कि मानसिकता मात्र कारण होइन। औसत डच व्यक्ति वा जुनसुकै राष्ट्रीयताको क्षमता अधिक। तपाईं तिनीहरूलाई जो पनि आर्गुमेन्टहरू, दृष्टान्त आदि जस्ता कुरालाई समझाउन सक्नुहुन्न। हल्का छ तर कुनै घर हो।
2 जुलाई 2019 मा 22: 40
यदि, एक अखबार को सम्पादक को रूपमा, तपाईं सतावट को बारे मा कुरा गर्छन
एक नयाँ पहिचान गरिएको मनपर्ने एक हो भने तपाईलाई थाहा छ कि तपाईं दया को सबै सीमाहरू पार गर्नुहुन्छ। (अधिशेष प्रायः प्रयोग गरिन्छ तर यसमा यो साँच्चै सहानुभूति छैन)
वा तपाईं जान्दछन् कि कुनै प्रतिरोध हुनेछैन किनभने कुनै प्रियजनहरू छैनन्, कसले भन्नेछ? हामी अझै थाहा छैन
सतावटको समयमा प्रेसको लागि विशेष रूपमा सजावट गरिएको ठाउँ थियो? पर्खनुहोस् !!! त्यहाँ हराइरहेको व्यक्तिको खोजको बारेमा त्यहाँ प्रेस प्रेस थिएन किनकि प्रेसले संकेत गरेको छ कि यो सम्भवतः एक अपराध थियो। 17 मिलियन मान्छे अनौपचारिक रूपमा सम्पूर्ण कथासँगै गए र पारदर्शिताको पूर्ण अधिकार, मिडिया / शक्ति / प्रहरीबाट व्याख्या गरिएको थियो।
किन कप्तानले प्रेस संवादमा सुनेनन्। किन सबै मिडिया (पेस्ट र पेस्ट फोरम) मा यति धेरै ध्यान पछि कुनै प्रेस सम्मेलनमा थिएन। किन जहाज / नाकाको नाम अज्ञात छ? किन किन तर्फबाट तान्ने गार्ड / प्रहरी र मर्मेचेसी को छवियों को हस्तांतरण मा छ? किन पीटर आर देवेन्सले आफूलाई आफूलाई आत्महत्या गरेका छन् भन्ने भन्नको लागि। यदि अन्जा साँच्चै मनोवैज्ञानिक रूपमा बेवास्ता भएमा, किन पत्रिकाले यसको बारेमा लेखेको थिएन?
किन जनताले परिवारको पार्टी वा ब्लाउवे बक्सको एक परिवारको सदस्यको बारेमा संदेहमा राखेका थिए, अन्तिम बैठक पछि यो पहिलो घोषणा भयो कि यो परिवारको पेय थियो र परिवारको "कोही" अझै पनि भनिन्छ: टैक्सी लिनुहोस्।
र यसैले दर्जनौं प्रश्नहरू छन् जुन संकलित रूपमा अविश्वसनीय कथाको रूपमा संकटमा पार्छ, जहाँ पत्रकारहरू जुन एक पटक जहाजका फोटोहरूसँग आउँदैछन् जुन अन्जाले भेट्टाए।
अथवा अब पत्रकारहरू छैनन् र सबै चीज काटिएका छन् र पेस्ट हुन्छ? Katwijkers एक-अर्का प्रश्नहरू सोध्न संकोच गर्दैनन्।
केवल माइक्रोफोनको साथ प्रहरी (डिक गोइजर्ट) को एक प्रवक्ताले यो एक्सएनएमक्सक्स लाख मान्छेलाई कथा ल्याएको छ, हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ कि पास्ता जस्तै
यहाँ डिक गजर्ट को पुलिस ले कहानी
3 जुलाई 2019 मा 08: 58
यो साँच्चै एक अजीब कहानी हो, एक्लै अत्यधिक ध्यान केन्द्रित ध्यान संदिग्ध हो। त्यहाँ केही चीजहरू छन् जुन मैले सोचेका छन्, तर मिडिया ध्यान अक्सर धेरै सीमित छ, कहिलेकाँही मात्र स्थानीय समाचारपत्र र यो हो। मलाई लाग्छ समाचारहरू समाचार वस्तुहरू उल्लेख गर्न धेरै छनौट हुन्छन् र यदि यो सामान्य ध्यान भन्दा बढि हो भने यो संदिग्ध वा शायद एक नकली कथा हो।
3 जुलाई 2019 मा 08: 49
1993 बाट चलचित्र विष्फोट व्यक्तिमा तपाईं हामी जान्छौं जहाँ हामी जान्छौं, धेरै समय अघि मैले फिल्म देखे र पहिले नै भनें कि संसार त्यहाँ जाँदैछ।
अब 2019 मा हामी देख्छौं कि यो धेरै सहि हो।
धूम्रपान नीति एक राम्रो उदाहरण हो, त्यसपछि शाकाहारी खाना धक्का। शराबको खपत चाँडो पनि घुम्नेछ र यति। हामी घातक दलियाबाट कति टाढा छौं कि तपाइँ फिल्ममा देख्नुहुन्छ कि 3D बिहान स्क्यानको नतिजा छापिएको छ?
फिल्ममा तपाइँले पनि देख्नुभयो कि तपाइँ कसरी कसमरी वा कर्सिङको लागि जुर्नु भएको थियो, जसले पर्खालबाट प्रिन्टरमा आइपुग्थ्यो। अब यस्तो प्रणाली चीनमा परिचालित छ र प्रिन्टरको सट्टा एसएमएस मार्फत पठाईएको छ।
बीचमा एक धेरै चिन्ताजनक विकास तर थुप्रै असाधारणका लागि, तपाइँ ती परिवारलाई थाहा छ? राम्रो काम, महंगी घर, धुम्रपान नगर्नुहोस्, शराब नगर्नुहोस् र शाकाहारी खाना खान नदिनुहोस्। बच्चाहरु लाई केहि र सबै चीजहरु मा टीका र यसैले केहि र सबै चीज को एलर्जी।
मिडिया द्वारा पूर्ण रूपमा खेले।
यो देखिन्छ कि मान्छे लाई अब भविष्यमा मजा गर्न को लागी अनुमति छैन, सायद भर्चुअल वास्तविकता मार्फत।
3 जुलाई 2019 मा 10: 06
साहसी नयाँ विश्व मदुरोमम। कुनै व्यक्ति यहाँ तर रोबोटहरू छैनन्। उनीहरूको "भावनाहरू" पनि परिचित छन्। र त्यसबारे सोच्न सक्षम हुन
रोबोटहरू ठीक छैन कि कंडीशनिंगको।
सबैकुरा गुरुङ बाहिर छ। सबै कुरा नकली छ, सबै कुरा यहाँ निर्देशित छ।
यसको उद्देश्य अन्ततः शक्ति, पूर्ण शक्ति हो
लिपि को केटाहरु र शासन को रुचि मा। ती केटाहरु लाई फेरि शक्ति कहिल्यै नबिर्सने योजना हो, सामान्य मार्ग सम्म पनि।
त्यहाँ एक समय आउनेछ जब हजुरआमालाई सामाजमा मार्ने को लागी निषेधित गरिन्छ, सामालाई। लिपि मालाका केटाहरूको लागि विद्रोहको प्रतीक हो, लिपिको केटाहरूको प्रणाली विरुद्ध विद्रोह।
4 जुलाई 2019 मा 20: 02
म अब अवरोधबाट छुटकारा छु कि मलाई कारवाही गर्नबाट रोक्न। सबैभन्दा महान् मार्टिनको भाग्य हो ...। र जब म प्रतिक्रियाहरु पढ्छु, कम से कम नामहरू, त्यहाँ धेरै छन् जसले अझै पनि (अझैसम्म) खुलामा प्रतिक्रिया गर्न हिम्मत गर्नु नदिने, र मेरा मतलब छैन कि मर्मतको रूपमा, म साँच्चै तीमध्ये एक हुँ!
तपाइँले मलाई बताउन सक्नुभन्दा पहिले के हुन सक्नु पर्ने हुन सक्छ ...
5 जुलाई 2019 मा 11: 34
बस मानिन्छ कि लिपि देखि मान्छे को सेवा वास्तव मा जान्छ कि सीप र अन्य पोस्टर यस साइट मा हो।
मार्टिनको साइटमा चिन्तात्मक अंकहरू पोस्ट गर्न डरलाग्दो सम्भावित उत्तरदायीहरू छन् भन्ने तथ्यले यो तथ्य भनेको यी उत्तरदायीहरू राम्रो तरिकाले जान्दछन् कि हामी एक तानाशाह, एक चुपचाप, सूक्ष्म आलोचनामा रहन्छौं।
महत्वपूर्ण हुनुको लागि पर्याप्त!
5 जुलाई 2019 मा 18: 49
मेरो लागि, म मेरो तत्काल वातावरण संग अधिक चिंतित हूं, मानें कि 'सेवा' भन्दा दोहोरो एजेन्डा वाला मान्छे छैनन्। र यद्यपि तिनीहरू जान्छन् कि हेर्न को लागी र यहाँ प्रतिक्रिया आउँछ, यो (अहिलेको लागि) तपाईंको वातावरणको लागि गुमनाम छ।
« नगदको उन्मूलन र जनताको कुल नियन्त्रणको लागि आदर्श अलबाय अपराध
मान्छे कसरी 'जागरूकता' को बारे मा कुरा गर्न सक्छ र एकै समयमा प्रणाली को बनाए राखन को मदद गर्दछ? »
कुल भ्रमण: 13.109.640
क्यामेरा2op 'भूत परिवार' साइकोप (मनोवैज्ञानिक अपरेसन): तपाईंको स्वतन्त्रता हरण र 'दिमाग पुलिस' परिचय